Anagu Ma Soo Qaban Karno Man City & Liverpool Haddii Ay Sii Wadan Qarash Garanaynta Lacagta- Mourinho Oo Wali Calaacalkiisa Sii Wata. - Gool24.Net
Anagu Ma Soo Qaban Karno Man City & Liverpool Haddii Ay Sii Wadan Qarash Garanaynta Lacagta- Mourinho Oo Wali Calaacalkiisa Sii Wata.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa dhibaato wayn ku qaba lacagta ay suuqa galiyaan kooxaha Manchester City iyo Liverpool iyo dhaq dhaqaaq xumada kooxdiisa Man United ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda wuxuuna Mourinho markale ku celiyay in kooxdiisa United ayna soo qaban karin Man City iyo Liverpool haddii ay qarash garanaynta lacagta suuqa sii wataan.
Manchester United ayaa suuqii xagaagii la soo dhaafay si xun ugu fashilantay iyada oo tan iyo markaas uu Jose Mourinho saxaafada la soo taagnaa erayo calaacal iyo cudur daar ah inkasta oo isaga laftiisu uu lacag badan ku bixiyay saxiixyadii uu sameeyay intii uu Man United joogay.
Manchester City ayaa suuqa kala iibsiga ku bixisay £527 milyan gini waxaana ku socda baadhitaan ay UEFA ku baadi goobayso haddii kooxda Guardiola ay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga balse Mourinho laftiisa ayaa suuqa galiyay lacag dhan £382.5 milyan gini kuwaas oo aan xataa noqon saxiixyo guulaystay.
Manchester United ayaa haddaba 18 dhibcood ka hoosaysa kooxda kaalinta kowaad ku jirta ee Man City taas oo uu Mourinho markasta ka hadlo suuqa iyo qaabka ay saamaynta ugu yeesheen wuxuuna sidoo kale raaciyaa Liverpool oo labadii xili suuq ee ugu danbeeyay fariin wayn dirtay.
Jose Mourinho ayaa u muuqda mid arimaha Man City iyo Liverpool ka hadlaya si uu ugu duro maamulka kooxdiisa Man United ee uu aaminsan yahay in ay ka gaabiyeen lacagtii ay suuqa galin lahaayeen, waxaana taas laga fahmi karaa qaabka uu hadalka u qaabeeyay.
Jose Mourinho oo ka hadlaya Man City iyo Liverpool balse qaab maldahan u hadlaya ayaa yidhi: “Haddii kuwa naga sareeyaa ay sii wadan isla jihada ay u socdaan isla markaana haddii ay sii wadaan hamiga iyo maalgalinta, taas waa hal shay. Shayga kale waa haddii ay joojiyaan ama haddii sharciga dhaqaale wanaagu uu iyaga joojiyo, kadib waxaanu si aayar aayar ah u soo yarayn karaana banaanka noo dhexeeya”.
Jose Mourinho ayaa aaminsan in haddii Man City iyo Liverpool ay ku sii socdaan jahada ay hadda ku taagan yihiin in ayna kooxdiisa Man United soo qaban karin isaga oo ku dooday in shayga hore uu yahay in ay joojiyaan qaabka ay maal galinta u sameeyaan si loo soo gaadhi karo taas oo fariin u ah maamulka Man United.
Jose Mourinho oo Manchester City ku duraya in ay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga yurub isla markaana ay jiraan soo jeedimo arintaas cadaynayaa yidhi: “Aduunyada waxaa ka buuxa soo jeedimo, anigu waligay maan ogaan haddii ay run yihiin iyo haddii ayna run ahayn isla markaana in aan taasi qiimeeyaa aniga shaqadayda ma aha”.
Liverpool oo kaalinta labaad ee Premier league ku jirta ayaa 16 dhibcood ka saraysa Man United wuxuuna Mourinho oo ka hadlaya Reds uu yidhi: “Anigu ma garanayo wixii ka dhacay Liverpool, Anigu waxaan ogahay oo kaliya tirooyinka, laakiin sababta ma garanayo”.